Mpaghara Moz: Mee ka Ọnọdụ Ọnọdụ Localntanetị Mpaghara Gị dịkwuo elu Site na Ndenye aha, aha ọma, na njikwa enye gị | Martech Zone
Mpaghara Moz: Mee ka Ọnọdụ Onlinentanetị Localntanetị Gị dịkwuo elu site na ndepụta, aha, na njikwa ọrụ
Friday, July 16, 2021 Friday, July 16, 2021 Douglas Karr
Dị ka a ọtụtụ mmadụ mụta maka ma chọta azụmaahịa mpaghara na ịntanetị, ọnụnọ dị n'ịntanetị dị mkpa. Ezigbo ozi gbasara azụmahịa, foto dị mma, mmelite kachasị ọhụrụ, yana nzaghachi maka nyocha na-enyere ndị mmadụ aka ịmụtakwu banyere azụmahịa gị ma na-ekpebi ma ha họọrọ ịzụta n'aka gị ma ọ bụ onye asọmpi gị.
Njikwa ndepụta. Site na ọtụtụ ngwọta dị ebe ahụ, ọ dị mkpa ịtụle akụkụ dịka ịdị irè, ịdị mfe nke iji ya na ọnụ ahịa ya.
Site na nchịkọta ndepụta akpaaka na nkesa data ọnọdụ na ọtụtụ saịtị tinyere njikwa aha, Moz Mpaghara -enyere gị aka ngwa ngwa ịnọgide na-enwe ezi ndepụta, zaghachi reviews, na biputere mmelite na-enye. Ezubere ngwa ọrụ anyị dị mfe iji mee ka ọnụnọ gị n'ịntanetị dị elu, bulie njikọta ndị ahịa, ma bulie ọhụhụ gị na nyocha mpaghara yana obere oge na mbọ. E wuru ya maka ụdị ụlọ ọrụ niile, site na obere ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, otu na azụmaahịa ọtụtụ ebe, na ụlọ ọrụ.
Nọgide Na-edekọ Ezi Ndepụta
Maka mpaghara SEO, ederede zuru oke na nke ziri ezi. Idebe adreesị, oge ọrụ, na nọmba ekwentị na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe dị mkpa iji chọọ yana ahụmịhe ndị ahịa. Moz Local enyere gị aka ịmepụta na ijikwa ndepụta azụmahịa gị dị na Google, Facebook, na saịtị ndị ọzọ iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịchọta ma họrọ azụmahịa gị.
You nwere ike imelite ndepụta gị niile site na otu dashboard, ma mụta ihe data, foto, ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ dị mkpa iji mezue ndepụta gị na profaịlụ gị ka ndị ahịa wee nwee ike ịchọpụta ngwa ahịa gị na ọ bụrụ na ọ dabara adaba maka ha. Ndepụta na-akpaghị aka na-ekesa gafee anyị na onye òtù ọlụlụ na netwọk, na anyị na-aga n'ihu Ndepụta mmekọrịta, gị Ndepụta anọ na-emelitere gafee search engines, online directories, na-elekọta mmadụ media, ngwa ọdịnala, na data aggregators na di ntakiri oge na mgbalị. Na usoro anyị na-akpaghị aka iji chọpụta, na-akwado ma na-ehichapụ ndepụta oyiri na-enyere aka ịkwụsị ọgba aghara.
Moz Local na-enyekwa gị akara ngosi arụmọrụ dị mkpa, dị ka Index Index, akara ọnụnọ n'ịntanetị, na akara izu ezu profaịlụ. Ọ ga-emekwa ka ị mara mgbe ị ga-eme ihe na ọkwa na ọkwa maka ihe chọrọ nlebara anya.
Anyị na-eji Moz Local iji nyochaa ọnọdụ ndepụta anyị, hụ nhụta ndepụta anyị na nchọta ma ghọta arụmọrụ ndepụta na ọkwa dị iche iche. Anyị bụ ndị ike inupụ na-agbanwe agbanwe ndepụta ndepụta isi directories na-enwe obi ụtọ na-arụpụta anyị na hụrụ.
David Doran, Director nke Strategy na Otu saịtị
Lelee Ndepụta Azụmaahịa Gị n'efu
Jikwaa aha gị
Na ọkwa mpaghara, nyocha nwere ike ịme ma ọ bụ mebie azụmahịa. N'elu 87% nke ndị ahịa kwuru ha na-eji nyocha ndị ahịa akpọrọ ihe ma naanị 48% ga-atụle iji azụmahịa na-erughị kpakpando anọ. N'ezie, obere ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghịdị apụta na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụrụ na nyocha ha erughị oke ụzọ.
Nyocha dị mma nwere ike inyere aka mee ka ogo ọchụchọ gị dị elu, mana ezigbo nzaghachi na nyocha na-adịghị mma ma ọ bụ nke agwakọtara na-emekwa ka mmekọrịta gị na azụmahịa gị dịkwuo mma yana inye onye nyocha ohere ịgbanwe akara ha.
Moz Local na-enye ndị ọrụ ohere inyocha, ịgụ, ma zaghachi nyocha dị nfe gafee engines ọchụchọ na weebụsaịtị sitere na otu dashboard. Nchịkwa nnabata dị ezigbo mkpa maka SEO na akara gị, yana Moz Local na-eziga mmelite na ọkwa ozugbo ma eziga nyocha ọhụụ. N'elu nke ahụ, dashboard na-enye gị ohere ịgbaso ọnọdụ dị n'ime nyocha, na-atụtụ mkpụrụ okwu na ọkara dị iche iche na-egosi n'ọtụtụ nyocha. Trendszọ ndị a na-enye nzaghachi bara uru sitere n'aka ndị na-azụ ahịa n'ihe azụmahịa gị na-eme nke ọma na ihe ọ nwere ike ịgbanwe.
Ekekọrịta mmelite na onyinye
Agingbanye ndị na-azụ ahịa ihe karịrị sekọnd ole na ole na-esiwanye ike kwa ụbọchị. Site na ọtụtụ saịtị, njikọ, na ozi achọtara na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ, ịpụ na ndị asọmpi bụ ihe ịma aka.
Ihe ndị na-azụ ahịa na-eme ma na-etinye aka na, agbanyeghị, bụ mmelite na onyinye na-agakarị. Idebe ndị ahịa mara maka akụkọ kachasị ọhụrụ banyere azụmaahịa gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ, ma ọ bụ onyinye pụrụ iche nwere ike imetụta ha ịzụta n'aka gị. I nwekwara ike ịkekọrịta akụkọ na Facebook ma ọ bụ biputere ajụjụ na azịza na profaịlụ azụmaahịa Google gị sitere na Moz Local.
Moz Local enyere gị aka ijikwa ndepụta azụmahịa gị na aha ọma na Google, Facebook na saịtị ndị ọzọ iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịchọta ma họrọ azụmahịa gị. Ezubere ya iji bulite ọnụnọ azụmaahịa mpaghara na-abawanye, nwekwuo njikọta ndị ahịa, ma bulie ọhụụ na ọchụchọ mpaghara yana obere oge na mbọ.
Anyị achọpụtala Moz Local ka ọ bụrụ ikpo okwu na-egbukepụ egbukepụ iji nyere aka bulie ọhụụ nke ndị ahịa anyị. Site na njirimara nchọta ahaziri nke ọma dabere na ọnọdụ onye ọrụ, Moz Local nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na okporo ụzọ ahịhịa na mkpokọta.
Niall Brooke, SEO njikwa na Matalan
Choputa ihe banyere Moz Local
Tags: akwụkwọ ndekọ aha azụmahịana-anakọta nyochadirectorynjikwa ndepụtaazụmahịa azụmahịa na-enyeọkwa obodonyocha obodoikemoz obodonjikwa ahaaha njikwa n'elu ikpo okwunyochaa nyocha
Douglas Karr Friday, July 16, 2021 Friday, July 16, 2021
Igwefoto IQ: Tinye Aka Eziokwu Dị Mkpa (AR) Iji mepụta Ngwaahịa Ngwaahịa
Iwuli ulo n'ime uzo obula nke njem ndi ahia gi